अनुहारको दागले हैरान हुनुहुन्छ ? दाग हटाई गोरो बनाउने ज्यादै सजिलो घरेलु तरिकाहरु जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
अनुहारको दागले हैरान हुनुहुन्छ ? दाग हटाई गोरो बनाउने ज्यादै सजिलो घरेलु तरिकाहरु जान्नुहोस्
अनुहारमा देखापर्ने दागले अनुहारको सुन्दरतामा ह्रास ल्याउँछ । प्राकृतिक रूपमा यस्ता दाग हटाउन यी उपाय उपयोगी हुन सक्छन्
अनुहारको दाग हटाई गोरो बनाउने ज्यादै सजिलो घरेलु तरिकाहरु
Don't Miss it भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ जान्नुहोस् फाइदाहरु
Up Next भन्टा सानो तर फाइदा भने ठुलो, भन्टाले हाम्रो स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदा के के छ त ? जान्नुहोस्
खानेकुरा चपाएर खादा यत्तिधेरै फाइदा हुन्छ, जान्नुहाेस्
खानालाई राम्राेसँग चपाएर खाने बानी गर्नाले शरीरमा निकै फाइदा पुग्छ । त्यसैले सधै खाना खादा राम्राेसँग चपाएर खाने बानी गर्नुपर्छ…
कहिलै नहासेको कालभैरवको मूर्ति एक्कासी कसरी हास्यो ? कारण यस्तो छ
काठमाडौंको हनुमानढोका दरबारको प्रांगणको उत्तरपश्चिमी भागमा काल भैरवको ठूलो प्रस्तर मूर्ति छ । कालो प्रस्तरबाट बनेको यो मूर्ति अति ठूलो…